Kowda Luulyo | HIGIL
Gabay / Saalax Xaashi Carab
Posted on Jimce, Luulyo 1, 2011 by Jidhidhico	Faallo u dhaaf
Ma ogtihiin in kowda Luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii ay ahayd maalin Jimce ah, sida maanta oo kale? Waxa suurtagal ah in dad badan oo inaga mid ihi ay maalintan farax ku xusuusanayaan; halka qaar kalena ay murugo ku xusayaan maalintan. Si kastaba ha ahaatee, ku soo dhawaada qoraalkan iyo gabaygan is wata, oo uu soo diyaariyey Idiris M. Cali:
K O N T O N G U U R O
WD: Idiris M. Cali
Hal sano iyo bar ka hor (Jan 16, 2010), Calanka Soomaaliyeed himilada uu u taaganyahay iyo tacaddiga la huwiyey maanta waxaa isla hal gabay inoogu muuqaaliyey (Allaha u Naxariistee) Saalax Xaashi Carab (Oct 10, 1955 – Aug 19, 2010). Waxa uu Saalax gabaygan, oo uu u bixiyey “Kontonguuro,” kaga warramayaa “duruufaha adag ee calanka iyo ummadda leh ba haysata”—waxa uuna u warramayaa calanka, oo u taagan dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Dhab ahaantii, calanku ma matalo dal iyo dadkiisa oo kaliya e, waxa uu calanku matalaa gobannimada. Waxa marag ma doon ah, in, waxa dadka Soomaaliyeedi ay sugayeen inta ku dhawdhaw siddeetanka sabaan (1884 – 1960), oo uu Timacadde sadareeyay, uusan ahayn calan maro laga karkaray—oo hindisihiisuna dhawaa—balse uu waxaasi ahaa madaxbannaanida iyo gacan-ku-haynta aayahooda ummadeed. Waxa se lagu dagmi karaa, in, garwaaqsashadaasu Calanside/Calansida kasta oo calanka jecel ay gaf u geysatay. Hasayeeshee, in aan ogaanno sababta ay Calansidayaashu calanka u sidaan saw kama sokeyso in aynu horta garanno sababta uu calankuba u sidmi karo?
Iyadoo kooban, jawaabtu saw ma’aha, in calanku uu summad u yahay himilo iyo dareen ummadeed oo waari og, waligiina uu cadow gudood iyo mid galoodba ku gadaamanyahay? Xilbaa naga saarane, cadowga gudaheenna ee liidaya calanka (u taagan jiritaankeenna) iyo kan dibadda ka soo weeraraya calanka saw inaan iska difaacno waqeen ma aha? Haddaynu is difaacno, calankeennu wuu difaacmi; haddaan isaga difaacnana, waynu difaacmi. Waxaana sunna ah in marka aynu isdifaaceenna ka run-sheegno uu calankeennu mar kastaba ahaan doono ka siigada naga maydha, cadceeddana noo soo saara. Caragaddiskaasi inuu jiro aynu ku baraarugsanaanno, oo xasuusnaanno in Sayidkuna uu ku dardaarmay:
Cirkaan di’in abaar daariyaad, dunida oo qiiqday
Dayax-ururka daariga ka maray, dirirka oo liiqday
Diiryaanka cuurshaa ku xigi, daacigii sabanne
Bal dayaay! duraabtaa horuu, daafta mariyaaye.
Gabaygan “Kontonguuro” inagu boorrin mahayo sidii aan difaac u gali lahayn, balse waxa uu inagu dhiirragelinayaa in aan baranno amma aynu xusuusnaanno milgada iyo taariikhda calankeenna. Waa isweydiimo e, hoggeebuu maanta calankeennu ku jiraa; yaase haadaan kasta dartii uga soo booday? Yaa u soo qudhgo’ay, yaase maanta ku qoslaya? Haddaba, calankeenna oon baadi-goobnaa waa innaga oo mar kale is gobeyna. Sida ugu fudud ee aan maanta isku gobeyn karraana waa: Innagoo is jeclaanna, oo nactooyada* dhexdeenna ah gubna, isla markaasna go’aan midaysan ka gaadhna run-isu-sheeggeena. Haddii aynu runta isu sheegno oo qudha, waxa dhexdeenna ka bixi lahaa: Is diiddada iyo kala gabbashada, kala dayoobka iyo kala jabka ku xalladaysmay, waa halkii Dhoodaane, run xasaynta been iyo xasarad, xayn isugu yeedhka.
Waxa uu Saalax, wuu inala joogaaye, kamid yahay inteenna aan runta xasayn karin. Gabaygiisan “Kontonguuro”-na been iyo xasarad isugu muusan kaayo yeedhin, ee runta geesinimada leh ayuu galalkeeda naga waraabinayaa. Inaynu runta fuudno, oon isku daweyno, si aan isugu soo dhawaanno, diyaar ma u nahay? Haddii aynu diyaar sidaa ku nahay, aynu wada akhrinno gabaygan, ay fartii Saalax (AuN) ku taallo dhan qoraal iyo dhan murtiba, oo munaasabadda maanta oo kale ah ku habboon:
* Ereyga “Nactooyo” gabay uu tiriyey Yuusuf Cabdullaahi Suusle ayaan ku maqlay; ereyganina wuu igala cuslaaday inaan ereyga “Nacayb,” oo la wada yaqaanno, ku baddasho. Sababta oo ah, ereyga “Nacayb” oo la boqortooyeeyay ayaa dhalay ereyga “Nactooyo,” oo la micne ah “Nacayb fogaaday, oo si xun loo buunbuuniyey.”
Previous post ← Hogattus: Shube
Next post Hawsha Gorfeeyayaasha Maansada →